ရည်းစားအတွေ့အကြုံ – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on February 5, 2021 Author admin	Comments Off on ရည်းစားအတွေ့အကြုံ
ငယ်စဉ်ကပင်စ၍ အလှကြိုက်မှုအကောင်းကြိုက်မှုများဖြင့် နစ်မွန်းလျှက်မိဘ အမြှောက်အစားကိုခံကာ ပျက်စီးခဲ့ရသော သူမ၏ပေါ့လျှော့သော စိတ်ဓါတ်တွင် ငယ်စဉ်ကပင် ရည်းစားထားချင်သည့်စိတ်ဖြင့်ဆယ့်သုံးနှစ် ဝင်ခါစကပင် အတန်းတူ ကစားဖက် လူလှလူချော လူခန့်ကလေး မောင်မြနှင့်ချစ်ကြိုးသွယ်ခဲ့လျှက် ရည်းစား ဖြစ်ခဲ့ရ လေသည်။ တစ် နှစ်၊ နှစ်နှစ်ဆိုသော အချိန်ကာလသည်ကျောင်းတက်ကျောင်းဆင်းရင်းဖြင့်ပင် တရက်ပြီး တရက်၊ တစ်လပြီး တစ်လ တနှစ်ပြီး တစ်နှစ်ပြောင်းလဲ၍လာခဲ့ရ ချေပြီးဖြစ်၍ ယခုဆိုလျှင် မောင်မြဦးက ဆယ့်ရှစ်နှစ်၊ မြင့်မြင့်ကြည်က ဆယ့်ခြောက်နှစ် ကျော်ခဲ့ပေပြီ။ ဒီနှစ်ကုန်၍ စာမေးပွဲအောင်လျှင် သူတို့သည် တက္ကသိုလ်ပညာရေးကို တက်လှမ်းကြပေတော့မည်။
ငယ်ငယ်ကထဲက ခန္ဓာကိုယ်မှာ အရွယ်နှင့်မမျှအောင် ဖွံ့ဖြိုးလာသည့် နည်းတူသူမ၏အတွင်းစိတ်များနှင့် သွေးသားများသည်လည်း ခန္ဓာကိုယ်နှင့် လိုက်လျောညီစွာ ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ရပေပြီ။ သည်မှာတင်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတတ်သည့် အတိုင်း ဆန္ဒတည်းဟူသော အလိုရမ္မက်သည် သူမ၏ရင်ထဲတွင်ပေါက်ဖွား တည်ရှိလာခဲ့ရပေသည်။သူမတင်လား ဆိုတော့လဲမဟုတ်ပါ။ မြဦးက သူမထက်ပင်အသက် တစ်နှစ်ကျော်မျှ ကြီးသူဖြစ်၍ သူလဲပဲ မြင့်မြင့်ကြည်နည်းတူရင်ထဲတွင် ဆန္ဒတရားတို့သည်ကိန်းအောင်းဖြတ်တည်လျှက် ရှိနေရပေသည်။ “ ကြည်ကြည်မနေ့က ညနေက ဘာလို့ မလာတာလဲ ငါဖြင့်စောင့်လိုက်ရတာ…..” “ ပြင်းလို့ပါ… အကိုဦးရာ တနေ့တနေ့ ဒီစကားတွေချည်း ထိုင်ထိုင်ပြီး ပြောနေရတာ…”။
အို…ကိုယ့် ရည်းစားမျက်နှာကိုကြည့်ပြီး အတူထိုင်နေရတာဘဲ ကြည်ကြည်ရာ ပျော်စရာ ကောင်းပါတယ်….ဟင့်အင်း….. ကြည်တော့ ပျင်းတယ်… နောက်ဆိုအကိုခေါ်ရင် မလာတော့ဘူး.. ဟင်…… ဒါဆို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ… ရိုးအလှသူ မြဦးမှာ ရင်ထဲရှိသည့်အတိုင်းပင် ပြောချလိုက်သည်။ သူ၏ရင်ထဲတွင်လည်း တကယ်ပင် စိတ် ညစ်ညူး၍ ကြံရာမရဖြစ်၍ သွားရသည်။ “ အကိုကလဲ သူများ သမီးရည်းစားတွေဆို သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းတာဘဲဟာ ကြည်သွားတော့မယ်….” မြဦးကိုကျောခိုင်းပြီးမှ အသံကို နှိမ့်၍ ပြောကာ သူ့မျက်နှာကိုမှလှည့်၍မကြည့်တော့ဘဲ မြင့်မြင့်ကြည်မှာ လွယ်အိတ်ကလေး တရမ်းရမ်းဖြင့်ထွက်ခွာသွားလေပြီဖြစ်သည်။ “ သူများ သမီးရည်းစားတွေဆို သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းတာဘဲ ဟာ ” ဆိုသော မြင့်မြင့်ကြည်၏ စကားလေးသည်။
မြဦး၏နားထဲတွင် ပဲ့တင်တွေထပ်၍ ကြားယောင်နေရလေသည်။ ရိုးအလှသော မြဦးကတော့ သူများ သမီးရည်းစားတွေသည် သူနှင့်မြင့်မြင့်ကြည်တို့ကဲ့သို့ပင်ရှိလိမ့်မည်ဟုသူကတွေးထင်ထားခဲ့သည်။ မြင့်မြင့်ကြည်၏ စကားကို မကြားဘူးစဉ်ကတော့ သူ၏စိတ်ထဲတွင်အများတကာ အတွဲတွေလိုဘာမှ ဆန်းပြားစွာရှိလိမ့်မည်ဟုမထင်ခဲ့။ ခုတော့ သူမသိသော အချက်ကို မြင့်မြင့်ကြည်က ထောက်၍ ပြသွားခဲ့ပေပြီ။ “ ဘာတွေများ ထူးခြားလို့ပါလိမ့် ” ဟူသော ဆန်းစစ်မှုအတွေး တွေက မြဦး၏ခေါင်းထဲသို့ဝင်၍ လာခဲ့ရသည်။ ဒါဆိုရင်သူများသမီးရည်းစားတွေ သည်သူတို့သမီးရည်းစားတွေထက် ဘာတွေထူးခြားနေသည်ဆိုသည်ကို မြဦး တစ်ယောက် သိရှိရန်လိုလာပေသည်။ သိချင်လာတာနှင့်အမျှ သိအောင်လုပ်ရပေတော့မည်။
ထိုသို့အတွေးတွေ ရှုပ်ရှက်ခတ်ကာနေစဉ်မှာပင် မြဦး၏ခေါင်းထဲသို့ အလင်းရောင် တစ်ချက်ထွက်ပေါ်၍လာရသည်။ ဒါကတော့ သူတို့နှင့် အနီးစပ်ဆုံး သမီးရည်းစားစုံတွဲဖြစ်သည့်ကိုဘသိန်းနှင့်မခင်တိုးတို့ စုံတွဲပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ မြဦးသည် ကိုဘသိန်းနှင့်မခင်တိုးတို့စုံတွဲကိုသွား၍သတိရလိုက်မိစဉ်မှာပင် နေ့လည်က သူနှင့်သံချောင်းတို့အတူလျှောက်လာ စဉ် ကိုဘသိန်းကြီးက သံချောင်းကိုမခင်တိုးထံသို့စေခိုင်းသံကြားလိုက်ရသည်။ ဒီည ကိုဘသိန်းကြီးက မခင်တိုးဆီသွားမယ်တဲ့ ……… သံချောင်းက မြဦးကို အာချောင်ပြီး ပြန်ပြောပြတာကတော့ မခင်တိုးကြီးအိမ်က လူကြီးတွေ အလစ်မှာ ခြံထဲသို့ ည ကိုး နာရီလောက်ဆင်းခဲ့ရန်ကိုဘသိန်းက မခင်တိုးကို ပြောခိုင်းသည်ဟု မြဦးသိထားရသည်။ ဒါဆိုရင်ကြာပါတယ်ဒီညဘဲ သူတို့အတွဲတွေ ဘယ်လိုလဲဆိုတာကို မြဦးစုံစမ်းရပေတော့မည်။
မခင်တိုး တို့အိမ်ဆို သည်မှာလည်း တခြားဝေးဝေးလည်း မဟုတ်။ မြဦးတို့အိမ်၏ အနောက်ဖက်တွင်ကပ်လျှက်ဖြစ်သည်။ ခြံစည်းရိုးကလည်း ခိုင်ခိုင်မာမာရှိသည် မဟုတ်တော့မြဦးတစ်ယောက်ကိုးနာရီထိုးသည်နှင့် အသာလေး မခင်တိုးတို့ ခြံဖက်သို့ မှောင်ရိပ်ခို၍ ဝင်လာခဲ့သည်။မခင်တိုးတို့တအိမ်လုံးမှာ မီးရောင်ဆို၍ ဘာမျှမမြင်ရ။ လူကြီးတွေဘဲ မရှိလို့လား။ ဒါမှမဟုတ်အိပ်ပဲ အိပ် ကုန်ကြလို့လားတော့မသိ၊ တအိမ်လုံး တိတ်ဆိတ်၍နေသည်။ လဆန်း ဆယ့်ျနှစ်ရက်၏ ည ကိုးနာရီထိုး လရောင်က သစ်ရွက်တွေ ကြားမှာ ဝိုးတဝါးထိုးကျ၍ နေသည်။ တွေ့ပါပြီ ခြံထဲရှိပိတောက်ပင် ပတ်လည်တွင်ဝိုင်း၍ ရိုက်ထားသော ဗျက် နှစ် ပေခွဲလောက်ရှိသော ခုံပေါ်တွင် ကိုဘသိန်း တစ်ယောက်ခြေတွဲလောင်းချကာ ထိုင်၍နေသည်။
မြဦးတစ်ယောက်ကိုဘသိန်းကိုလှမ်း၍ တွေ့မြင်လိုက်ရသည့်တခဏမှာပင် မြဦး၏ဘေးဖက် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ တစ်စုံတစ်ဦး လျှောက်၍လာသည်ကို သတိထားမိလိုက်သဖြင့် မြဦးသည်အနီးတွင်ရှိသော စပယ်ရုံဘေးရှိ မှောင်ရိပ် ထဲသို့ ပြေး၍ကပ်ကာ ပုန်း၍နေလိုက်သည်။ ပြီးတော့သူ၏အကြည့်က ထိုနေရာသို့ လှမ်း၍ ကြည့်လိုက်တော့ လျှောက်လာသူမှာ မခင်တိုးပင်တည်း။ မခင်တိုးသည် ခပ်သွက်သွက်လေး လျှောက်၍လာရင်းက ကိုဘသိန်းရှိရာသို့ပိတောက်ပင်ကြီးဆီသို့ဦး တည်၍ သွားတော့ရာ မြဦးကလဲ ခါးလေးကိုကုန်း ဇက်ကလေးကို ပု၍မှောင်ရိပ်ကိုအကာအကွယ်ယူကာ ပိတောက် ပင်ကြီး ဘေးရှိ ဇီဇဝါပန်းခြုံကြား ဘေးမှောင်ရိပ်ထဲသို့ တိုး၍ဝင်လိုက်သည်။ မြဦးရောက်ရှိသွားသော နေရာမှာ ကိုဘသိန်းထိုင်နေသည့် နေရာနှင့်ဆိုလျှင် ငါးပေခန့်သာဝေးမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင်သူရောက်နေသောနေရာမှာ ပိတောက်ပင်ကြီး၏ အရိပ်ကလည်း ထပ်ဆင့် ထိုးကျ၍နေပြီး ဇီဇဝါပန်းရုံ၏ အရိပ်ကလည်း ရှိနေလေရာ အတော်လေး ပင် မှောင်မဲ၍ နေသည်။ မြဦးတစ်ယောက်ဇီဇဝါပန်းရုံကြီးဘေး ရောက်လာစဉ်မှာပင်မခင်တိုးကလဲ ကိုဘသိန်းကြီး၏ ရှေ့သို့ရောက်၍ လာခဲ့ချေပြီ။ “ စောင့်နေတာ ကြာပြီလား ကိုသိန်း….” “ အင်း ….အတိုးကလဲ ကြာလိုက်တာကွာ… လာပါ့ လာပါ့ မလားလို့…” “ လူကြီးတွေ အိပ်အောင် စောင့်ရသေးတယ် အကိုရဲ့ … ” မခင်တိုးက ပြောပြောဆိုဆိုပင် ကိုဘသိန်း၏ ဘေးသို့ဝင်၍ ထိုင်လိုက်လျှင် ဘာမပြော ညာမပြောနှင့် ကိုဘသိန်းကြီးက မခင်တိုးကို ဖက်၍ ပါးလေးနှစ်ဖက်ကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်ပင် မွှေးကြူ၍ နေလေတော့သည်။ မခင်တိုးတော့ဘယ်လိုနေသည် မသိပေ။
မြဦးတစ်ယောက်တော့ အသက်ရှုနေတာပင် ရပ်သွားမတတ်ဖြစ်၍ သွားရလေသည်။ အလဲ့… မခင်တိုးကလဲ အာဂပင် သူမ၏လက်တဖက်က ကိုဘသိန်းကြီး၏ ခါးကြီးကိုပင်ပြန်၍ ဖက်ထားသေးသည်။ ကိုဘသိန်းကြီးက မခင်တိုး၏ မျက်နှာလေးကို မွှေးကြူရရုံဖြင့် အားရပုံမပေါ်သေးပါ။ သူ၏နှုတ်ခမ်းထူထူကြီး က မခင်တိုး၏ နှုတ်ခမ်းပါးလေတွေပေါ်သို့ ဖိကပ်၍ စုတ်နမ်းနေတော့ရာ ကျန်နေသော မခင်တိုး၏ လက်လေးတစ်ဖက် ကပါ ကိုဘသိန်း၏ ကျောပြင်ကြီးကိုဖက်၍ထားပြီး သူတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အတင်းပင် တိုး၍ ဖက်လိုက်ကြသည်ကိုမြဦးက သဲကွဲစွဲမြင်လိုက်ရသည်။ မခင်တိုး၏ မျက်လုံးတွေကလဲ မှိတ်၍သွားသည်ကို တွေ့မြင်လိုက်ရသည်။ မြဦးတစ်ယောက်ဘယ်လိုဖြစ်လာသည်မသိ။
တကိုယ်လုံး ထူပူ၍လာရာက နတ်ကျသလို တုန်တုန်ယင်ယင် ဖြင့် ဖြစ၍်လာရတောသ့ည။် ဒအီချနိမ်ှာပင် မြဦး သတထိားမလိကိုတ်ာက သမီးရည်းစား နစ်ှယောက်တေရွ့င် စကားတွေ ဖေါင်လောက် အောင်ပြောသည်ဟု သူသိထားသည်မှာ မှားယွင်း၍နေပါပြီကော။ ကိုဘသိန်းနှင့်မခင်တိုးတို့ စကားတွေ ဘာမျှမပြောလိုက်တစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းသာ ပြောရ သေးသည်ကို သူကြားလိုက်ရသည်ဟု တွေးတောလိုက်မိသည်။မြဦးတစ်ယောက်ကြည့်နေစဉ်မှာပင်ကိုဘသိန်းက မခင်တိုး၏ နှုတ်ခမ်းတွေကို မလွတ်တမ်း ငုံခဲထားရင်း ကပင်သူ၏လက်ကြီးတဖက်က မခင်တိုး၏နို့အုံတွေကို အကျီင်္ပေါ်မှာပင် ဆုတ်နယ်ချေမွ၍ နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ သိပ်မကြာလိုက်သော အချိန်တွင်ပင် ကိုဘသိန်းကြီးက မခင်တိုး၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ခါးမှပွေ့ကာ ခုံတန်းပေါ်သို့ ပက်လက်လှန်၍ ချလိုက်လေသည်။
မခင်တိုးတစ်ယောက် ပက်လက်လေး ဖြစ်သွားစဉ်မှာပင် သူမ၏ ကိုယ်လုံးပေါ်မှပါ၍သွားသော ကိုဘသိန်းကြီးသည် လက်တဖက်က မခင်တိုး၏ အင်္ကျီကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ်လိုက်ရာက အင်္ကျီရင်ဘတ်နှစ်ခြမ်းကို ဘယ်ညာဖွင့်ဟ လိုက်သောအခါတွင်တော့ ကိုဘသိန်းတော့ ဘယ်လိုနေသည်မသိမြဦးတစ်ယောက် ကတော့ ရင်ထဲတွင် ဒိန်းကနဲ ဖြစ်သွားပြီး သူ၏မျက်လုံးတွေကိုလည်း မျက်တောင် ခတ်ရန်ပင် မေ့၍ သွားရလေသည်။ ဘော်လီအင်္ကျီအတွင်းမှပြည့်အံကာ ထွက်နေသော မခင်တိုး၏ နို့အုံသားတွေသည်အိဖေါင်း၍ လရောင် အောက်မှာပင် ဖွေးနှစ်၍ နေလေသည်။ မက်မောစရာ ကောင်းလှလွန်း၍ ကိုဘသိန်းသည်သူ၏ခေါင်းကြီး ငုံ့၍ တရှုံ့ရှုံ့နမ်း၍နေလေသည်။ ပြီးတော့ ကိုဘသိန်း၏ လက်က အငြိမ်မနေဘဲ မခင်တိုး၏ ဘော်လီအကျီမှ ချိတ်တွေကို ပါဖြုတ၍်နေလေသည။်
ပြီးတော့ သမူ၏ဘောလ်ီ အကျင်္ကီို လနှ၍် တငလ်ကိုရ်ာက ကဘိုသနိ်းသညမ်ခငတ်ိုး၏န့ေိုတွကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆုတ်နယ်၍နေပြန်လေသည်။ နို့ကြီးနှစ်လုံးမှာ လရောင်ဖွေးဖွေးတွင်ဖြူဖွေး၍နေသည်။ ကိုဘသိန်းကစိတ်တွေ အလွန်ပင် ထလာပုံဖြင့် မခင်တိုး၏နို့တွေကို အတင်းပင်ငုံ့၍ စို့လေတော့သည်။ မြဦးတစ်ယောက်ကတော့ မတ်တတ်ပင် မဟုတ်နိုင်တော့။ ဒူးတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်၍လာရပေပြီ။ ပြီးတော့ တခါဘူးကမှ မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရဘူးလေသော ခံစားမှုတွေကလဲ သူ၏တကိုယ်လုံးတွင် ရှိန်းဖိန်းကာ ဖြစ်ပေါ်နေလျှက်သူ၏ ပုဆိုးတွင်းမှ ဖွားဘက်တော်ကြီးက တောင်မတ်၍ တဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေလေသည်။ ကိုဘသိန်းကတော့ တရှုးရှုး တရှဲရှဲဖြစ်၍လာရာက မခင်တိုး၏ထဘီကိုပင် လှန်၍တင်လိုက်ရာက သူမ၏ပေါင်နှစ်လုံးတွင်ဝင်၍ ဒူးထောက်ကာ ထိုင်လိုက်လေတော့သည်။
မခင်တိုး၏ပေါင်တံကြီးတွေမှာ လရောင်တွင်ဖြူဖွေး၍နေပြီး တလုံးတခဲကြီးဖြစ်ကာ တပ်မက်စရာကြီးပင်သူ တခါဘူးကမျှမမြင်ဘူးလေသော အရွယ်ရောက်ပြီး မိန်းမတစ်ယောက်၏မမြင်အပ်လေသော ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း တွေကိုမြဦးသည်တစ်ခုချင်း ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်နေရချေပြီ။ ဒါ့အပြင်ယခုသူ့ရှေ့မှမြင်ကွင်းကလည်း သူ ကြားဖူးနားဝသာ ရှိခဲ့ဖူးသည်။ မမြင်ခဲ့ဘူးလေသော မြင်ကွင်းပင်တည်း။ သူမ၏ပေါင်ဖြူဖြူကြီးနှစ်လုံးကြားတွင်ကိုဘသိန်းကဝင်၍ ထိုင်လိုက်ရာက ဒူးထောက်၍ သူ၏ပုဆိုးကိုချွတ် ကာ ချလိုက်တော့သည်နှင့် မခင်တိုး သည်လည်းသူမ၏ ပေါင်နှစ်လုံးကိုဆွဲ၍ထောင်လိုက်လေတော့သည်။ ဒီအချိန်မှာပင်ကိုဘသိန်းကသူ၏ လီးတန်ကြီးကိုကိုင်၍ လီးတန်ကြီးထိပ်နှင့်။
မခင်တိုး၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ခုလုံး ကိုထိကာ အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက်အထက်အောင်စုန်ဆန်ကာ ပွတ်တိုက်ပေးနေလေသည်။ “ အ…အကိုသိန်း….ဟင့် …တော်တော်ကြာ လူကြီးတွေနိုးလာရင်ခက်မယ်..” မခင်တိုး၏ စောက်ပတ်ဝတွင်လည်း စောက်ရည်များမှာ စိမ့်၍ထွက်နေချေပြီ။ မခင်တိုးမှာ ဒီ့ထက်ပိုပြီးစိတ် မရှည်နိုင်တော့ပေ။ အနေရ အထိုင်ရ ခက်နေပုံရသည်။ မခင်တိုးတစ်ယောက်တည်းပင် နေရထိုင်ရ ခက်လှသည်မဟုတ်။ မြဦးသည်လည်း ဒူးတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်လာသဖြင့် မတ်တပ်မရပ်နိုင်သဖြင့် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်သည်။ ဟော ခုတစ်ခါ ထိုင်၍ကြည့်ရသည်မှာ အားမရသဖြင့် မြဦးတစ်ယောက်မတ်တပ်ထ၍ ရပ်ကာကြည့်နေပြန်လေပြီ။ မခင်တိုး၏ အခြေအနေကို ရိပ်စားမိလေသော။
ကိုဘသိန်း ကလည်း လက်တဖက်က သူမ၏စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ခုပေါ်တွင် လက်ညှိုး လက်မတို့ ဖြင့်အသာလေးဖိကာဖြဲလိုက်ပြီး သူ၏လီးတန်ကြီးကို တေ့ကာဖိ၍ လိုးသွင်းလိုက်လေတော့သည်။ “ အ…အမလေး…ဟင်း ….အရမ်း…အရမ်းကြီးဘဲ… အကိုသိန်း ကလဲ…. ဒီမှာ….နာသွားတာဘဲ…. ဟွန်း…” မခင်တိုးက သူမ၏နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ချွတ်ကာမူမူ စူစူလေးပြောလိုက်သည်။ “ တော်တော် နာသွားလားဟင်…..အကိုလောကြီးသွားလို့ပါ….” “ နာတာပေါ့… ဖြေးဖြေးလုပ်လဲရတာဘဲ….ဟာ…. “ “ ခုရော…. ဆက်ပြီး….နာနေသေးလား…” “ ကဲပါ….မနာတော့ပါဘူး… လုပ်မှာ လုပ်ပါတော့လူကြီးတွေနိုးလာရင် ခက်မယ်..” သူမ၏စောက်ပတ်ထဲတွင် ကိုဘသိန်း၏ လီးတန်ကြီးမှာ တဆုံးဝင်လျှက် တစ်လစ်ကြီးဖြစ်နေသည်ကို အား မလို အားမရဖြစ်လျှက်။
လီးတန်ကြီးကလဲ မလှုပ်ရှားဘဲငြိမ်နေလေတော့ အဆမတန်ရမ္မက်စိတ်တွေ ပြင်းပြလာရ သော မခင်တိုးက ကိုဘသိန်းမြန်မြန်လိုးစေရန် လူကြီးတွေကို အကြောင်းပြလျှက်လောဆော်လိုက်သည်။ ဒါကိုပင်မြဦးက မယောင်မလည်ဖြင့်အိမ်ကြီးဖက်ကို လှည့်၍ ကြည့်လိုက်သေးသည်။ ကိုဘသိန်းကတော့ သူ၏ လီးတန်ကြီး ကိုညင်သာစွာ ဆွဲ၍ထုတ် လိုက်ရာက စ၍လိုးနေချေပြီ။ ဆယ်ချက်မျှ ခပ်ဖြေးဖြေးလုပ်ပြီးသည်နှင့် အားမရနိုင်ဖြစ် လာရသော ကိုဘသိန်းသည် စိတ်ထင်တိုင်း ဆောင့်လိုးလေတော့သည်။ မခင်တိုး ခမျာမှာတော့ မျက်လုံးနှစ်လုံး စုံမှိတ်ထားရင်း ဟင့်ကနဲ အင့်ကနဲပင်ဖြစ်ကာ အားပါးတရကြီးကို ကော့ပေးနေတော့သည်။ ဒါ့အပြင်မခင်တိုးက သူမ၏ ဒူးကွေးကာ ထောင်ထားသော ခြေထောက်လေးနှစ်ဖက်ကို ကုန်း၍ လိုးနေသော ကိုဘသိန်း၏။
တင်ပါးပြောင်ပြောင်ကြီးပေါ်သို့ ချိတ်ကာတင်လိုက်ပြီး စောစောကထက်ပင်တိုး၍ ကော့ပေးနေပြန်ပါသည်။ စောက်ရည်ကြည်တွေ အတော်ပင်ရွှဲစိုနေပြီဖြစ်သော မခင်တိုး၏ စောက်ပတ်ကြီးကြောင့် “စွပ်”ကနဲ “ပြွတ်”ကနဲ “ဖွတ်”ကနဲ အသံတွေ မှာလည်း တဖြေးဖြေး သိသိသာသာပင် ထွက်ပေါ်လာပြန်ပါသည်။ မြဦးခမျာမှာတော့ ဆက်လက်၍ကြည့်ဖို့ရာ မစွမ်းတော့ပေ။ သူ၏တကိုယ်လုံးရှိ အားအင်တွေမှာလည်း ဘယ်ကိုရောက်သွားသည်မသိ တကိုယ်လုံးချိနဲ့ကာနေသည်။ ဒါတင်မကသေး ရင်ထဲတွင်လည်း ဟာတာတာ ဆာတာတာဖြင့် အသက်ရှုရတာလဲ ရင်မောကာ ကြပ်၍နေလေသည်။ ဒါ့အပြင်ရင်တွေလဲ တဒိန်းဒိန်းခုန်နေပြီး ကိုဘသိန်း၏ ဆောင့်ချက်ကြောင့်လှုပ်ခါနေလေသော မခင်တိုး၏ နို့အုံကြီးတွေကိုပင် ပြေး၍ ကိုင်လိုက်ချင်သည်။
ပြီးတော့ သူ၏အာရုံထဲတွင်လည်း မြင့်မြင့်ကြည်ကိုမြင်ယောင်၍ နေရလေသည်။ မြဦးသည် ရပ်၍နေရာမှ အသာပင်လှည့်၍မှောင်ရိပ်ကိုခိုကာ ပြန်လာခဲ့လေသည်။ အပြန်လမ်းခရီးတွင်တော့မြင့်မြင့်ကြည်ပြောသည့်“ သူများ သမီးရည်းစားတွေဆို သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်” ဆိုတာ ဒါကိုဘဲ ပြောတာလားမသိ အို… ဒါဘဲရှိတာဘဲ ဒါကိုဘဲ ပြောတာ သေချာပါတယ်။ ငါတို့ ကိုဘသိန်းက မခင်တိုးကို လုပ်သလိုမြင့်မြင့်ကြည်ကို လုပ်ပစ်လိုက်တော့မယ်။ သူပြောတာ ဒါဘဲဖြစ်မှာပါ။ သေချာပါတယ်… အင်း… ဒီညကတော့ အချိန်မရှိတော့ဘူး နက်ဖြန်က ကျောင်းပိတ်ရက် ဒါပေမဲ့ မြင့်မြင့်ကြည်အိမ်က လူကြီးတွေ ဈေးထဲတွင်ဆိုင်သွားထွက်ကြသဖြင့်နေ့ခင်း ဘက်မြင့်မြင့်ကြည်ပဲရှိမည်။ မြင့်မြင့်ကြည်သာရှိမည် မနက်ဖြန် ငါသွားဖြစ်အောင်သွားရမည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ခုလဲ မြင့်မြင့် ကြည်ကို တွေ့လိုတွေ့ငြား သူ့အိမ်ရှေ့ဖက်ဖြတ်၍ လျှောက်ဦးမည်ဟုလည်း အရမ်းကိုကြွတက်နေသော မြဦးက စဉ်းစားတွေးတောကာ ထွက်လာခဲ့သည်။ အမှန်တော့ ကိုဘသိန်းနှင့် မခင်တိုးတို့သည် ကိုဘသိန်းက အသက် နှစ်ဆယ့်လေးနှစ်၊ မခင်တိုးက အသက်နှစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး သူတို့နှစ်ယောက် သမီးရည်းစား ဖြစ်ကြသည်မှာ ခြောက်နှစ်မျှရှိခဲ့ပြီး ခုလိုလင်မယားမကျ ဖြစ်နေခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်လောက်ပင် ရှိနေပြီဆိုသည်ကိုတော့ မြဦးတစ်ယောက်မသိရှာပါပေ။မြဦးနှင့်မြင့်မြင့်ကြည်တို့ သမီးရည်းစား နှစ်ယောက်တွင်တော့ မြဦးက (၁၇)နှစ်ကျော် (၁၈)နှစ်အတွင်း၊ မြင့်မြင့်ကြည်က (၁၆)နှစ်ကျော်ကျော် သာရှိနေသေးသည်ကိုတော့ မြဦးသည် ပြန်လည်၍ မဆန်းစစ်ခဲ့မိချေ။
ဒါ့အပြင်သူတို့နှစ်ဦးသည် ကာမကိစ္စကို ယခုမှလက်တည့်စမ်းရန် ကြံရွယ်ရုံသာ ရှိကြသေးပြီး ပြောရမည်ဆိုလျှင် မြဦးသည် မြင့်မြင့်ကြည်၏ ပါးဖြူဖြူမို့မို့လေးများကိုပင် တခါဘူးကမျှ မမွှေးကြူခဲ့ဖူးချေ။ ခုတော့ဖြင့် အတုမြင် အတတ်သင် ဆိုတာမျိုးလို မြဦးတယောက် တည်ငြိမ်နေသော သူ၏ရင်တွင်ဂယက်လှိုင်းတို့သည် ကြောက်ခမန်း လိလိရိုက်ခတ်၍နေရပြီ ဖြစ်ပါတော့သည်။ “ မြင့်မြင့်ကြည်….. ရော့….” “ ဘာတုံး….သံချောင်း…ရ..” “ မြဦးက နင့်ကို စာပေးခိုင်းလိုက်လို့…” “ အံမယ်…..ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပေးစမ်းပါအုံး….” မြင့်မြင့်ကြည်က သံချောင်းလှမ်း၍ ပေးနေသောစာရွက်ခေါက်လေးကို လှမ်းယူ၍ စာရွက်ခေါက်လေးကို ဖြန့်ကာ ဖတ်လိုက်လေသည်။ ကြည်ကြည်…… ကိုဦး နေ့လည်(၁၂) နာရီကြည့်အိမ်ကို လာခဲ့မယ်။
ကြည်နဲ့ နှစ် ယောက်ထဲ တွေ့ချင်တယ်… ဆက်ဆက်စောင့်နေပါနော်….. ချစ်တဲ့ ကိုဦး စာရွက်လေးကိုဖတ်ပြီးသည်နှင့်မြင့်မြင့်ကြည်သည်ပြုံး၍ ရယ်ကျဲကျဲလေး လုပ်လိုက်သည်။ “ အေး…. လာခဲ့လို့ပြောလိုက် သံချောင်း…ငါစောင့်နေမယ်.. သူ့ကို စာကူးခိုင်းစရာရှိတယ်….” “ အေး…အေး….ငါပြောလိုက်မယ်….” သူမ၏ရှေ့မှသံချောင်းထွက်သွားသည်နှင့်မြင့်မြင့်ကြည်သည် စာရွက်လေးကို တခါဖြန့်၍ ဖတ်ကာ ပြုံးလိုက် ပြန်သည်။ ပြီးမှ စာရွက်လေးကိုသေချာစွာပြန်ခေါက်ပြီး သူမ၏လက်ကလေးဖြင့် ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်လိုက် လေတော့သည်။ ရင်ထဲတွင် ပီတိတွေဖုံး၍ သွားခဲ့ရသော်လည်း မြင့်မြင့်ကြည်သည် မြဦးကို မယုံရဲသေး။ ဒါမျိုး မြဦးက မချိန်းစဖူး အချိန်းထူးလာသဖြင့်သာ သူမ၏ ရည်းစား မြဦးတစ်ယောက် အဆင့်တွေတက်ကာ တိုးတက်လာပြီဟု တွေးလိုက်မိရင်း ပီတိဖြစ်ကာ ပြုံးမိခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါပေမဲ့လည်း မြဦးက ရောက်လာလျှင်ဘာတွေပြောဦးမည်မသိ။ မနက်ဖြန်ကျောင်းမတက်နိုင်၍ ခွင်တိုင်ခိုင်းပြီး ပြန်သွားဦးမည်လားမသိ။ စဉ်းစားမိရင်း မြင့်မြင့်ကြည်က ထပ်မံ၍ ပြုံးလိုက်မိပြန်သည်။ အဲတော့ သူက နှစ်ယာက်ချင်း တွေ့ချင်တယ်တဲ့ဘာများလဲမသိဘူး။ ကိစ္စမရှိဘူး နေ့ခင်းဖက်အိမ်တွင် လူကြီးတွေ တစ်ယောကမှမရှိ ဈေးထဲမှဆိုင်တွင်ရောက်နေ ကြမည်။ အင်း(၂)ယောက်ထဲ(၂)ယောက်ထဲ။ ထူးထူးဆန်းဆန်း ချိန်းဆိုလာခဲ့သော မြဦး၏စာကြောင့်မြင့်မြင့်ကြည်မှာ အတွေးနယ်လွန်နေမိပါတော့သည်။ ညကမြဦးတစ်ယောက် မခင်တိုးတို့ခြံထဲမှ ပြန်၍ထွက်လာခဲ့ပြီး သူ၏အိပ်ခန်းထဲသို့ ဝင်ကာ အိမ်ပေါ်သို့ပင် ပြန်၍မတက်တော့ဘဲ မြင့်မြင့်ကြည်တို့အိမ်ဖက်သို့လာကာ အိမ်ရှေ့လမ်းမမှဖြတ်၍လျှောက်ရင်း မြင့်မြင့်ကြည်ကို သူမ၏အိမ်ဖက်သို့လှည့်၍ ကြည့်ကာရှာဖွေကြည့်မိသည်။
မြဦးသည် မြင့်မြင့်ကြည်၏ရုပ်သွင်ကို လတ်တလော အတော်ပင်တွေ့ချင်နေလေသည်။သူ့ကိုယ်သူလဲ ဘာဖြစ်မှန်းမသိပေ။ ဒါပေမဲ့လည်း မြင့်မြင့်ကြည်တို့တအိမ်လုံးသည် မှောင်မဲကာ တအိမ်လုံး အိပ်၍နေကြချေပြီ။ဒါတောင်မှမြဦးက ဇွဲ မလျှော့သေးဘဲ သူမ၏အိမ်ရှေ့သို့ တစ်ခေါက်ပြန်၍လှည့်လာကာ ဖြတ်၍လျှောက်ကာ ကြည့်မိပါသေးသည်။ မြဦးတစ်ယောက်ဘယ်လိုဝေဒနာတွေ ကပ်ရောက်စွဲညှိလာသည်ဟု မဆိုသာ။ တစ်ညလုံးကိုအိပ်၍မရနိုင်အောင်ဖြစ်နေရသည်။ ညဘက် အပေါ့အပါး သွားချင်၍ထတော့ နောက်ဖေးက တံခါးကိုဖွင့်ရင်း မခင်တိုးတို့အိမ်ဖက်ကိုပင် သူသည် ရပ်၍ကြည့်နေမိခဲ့သေးသည်။ တညလုံး အိပ်မပျော်နိုင်သော မြဦးတစ်ယောက်မနက်မိုးလင်းခါနီးမှ အိပ်၍ ပျော်သွားသဖြင့် နံနက်(၈) နာရီကျော်မှအိပ်ရာကနိုး၍ လာခဲ့သည်။
သည့်နောက်လမ်းထိပ်ကိုထွက်ကာ သံချောင်းကိုရှာ၍ မြင့်မြင့်ကြည်ထံစာသဝဏ်လွှာပါးလိုက်သည်။ပြီးတော့မှစိတ်ချလက်ချဖြင့် အမေပေးလိုက်သော မုန့်ဘိုး(၅)ပြားဖြင့် ဘာဘူကြီးဆိုင် တွင်လက်ဘက်ရည်ဆိုင်သို့ဝင်၍ သောက်ခဲ့သေးသည်။ နေ့လည်(၁၂)နာရီ မထိုးမှီမှာပင် မြဦးသည်မြင့်မြင့်ကြည်တို့အိမ်ရှိရာသို့ထွက်၍လာခဲ့သည်။ မြင့်မြင့်ကြည် တို့အိမ်မှာ တိုက်ခံနှစ်ထပ်အိမ်ဖြစ်သည်။ သူရောက်သွားတော့ အိမ်ရှေ့တံခါးမှာ အဆင်သင့်ဖွင့်ထားသဖြင့် ခါတိုင်း လိုပင်မြဦးသည် အိမ်ထဲသို့ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ အိမ်အောက်တစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ်၍နေသည်။ အိမ်ရှေ့တွင် ဘယ်သူမှမရှိမြဦးသည်အောင်ထပ်တွင်ပင်ရှိသော မြင့်မြင့်ကြည်၏ အိပ်ခန်းရှိရာသို့လျှောက်၍လာခဲ့သည်။ ရောက်ပါပြီ မြဦးတစ်ယောက် မြင့်မြင့်ကြည်၏အိပ်ခန်းရှေ့သို့ရောက်ပါပြီ။
တံခါးပိတ်ထားသဖြင့်လက်ဖြင့် အသာလေးတွန်းကြည့်တော့ တံခါးရွက်(၂)ချပ်သည်စေ့ထားသဖြင့်သူအသာအယာ တွန်းလိုက်သည်တွင် ခပ်ဟဟ လေးပွင့်၍သွားသည်။ တွေ့ပါပြီ မြင့်မြင့်ကြည်ကိုမှန်တင်ခုံရှေ့တွင် ထိုင်၍အလှပြင်နေသည်ကို ရေချိုးပြီးကာစတော့ ဟုတ်မည်မထင်။ တံခါးဝကို ခပ်စောင်းစောင်းလေး နောက်ကျောပေး၍ထိုင်နေသော မြင့်မြင့်ကြည်ထံသို့မြဦး၏ အကြည့်တွေက ရောက်သွားပြီး တခဏမှာပင်မို့မို့လေးဖေါင်း၍နေသော သူမ၏ရင်အုံလေးနှင့် ကား၍ အိဖေါင်းကာ ပြည့်တင်းနေသော သူမ၏တင်သားတွေဆီသို့ မြဦး၏အကြည့်တွေက ရွေးချယ်၍ ရောက်ရှိသွားခဲ့ရလေပြီ။ မခင်တိုးလောက်တော့မြင့်မြင့်ကြည်သည် ကိုယ်လုံးမဖွံ့ဖြိုးသေးဘဲ သူ့ဟာနှင့်သူတော့ကိုယ်လုံးမှာ အတော်လေး လှ၍နေသည်ဟု မြဦးက မှတ်ချက်ချ လိုက်မိရင်း။
မြင့်မြင့်ကြည်၏ အိပ်ခန်းထဲသို့လှမ်း၍ ဝင်လိုက်ရာ မြင့်မြင့်ကြည်ကလဲ သူ့ဆီသို့လှည့်အကြည့်ဖြင့်ဆုံကြလေသည်။ “ လာ…ကိုဦး….ထိုင်လေ….” “ အင်း…” အခန်းထဲတွင် ထိုင်စရာနေရာရှာလိုက်တော့ မြင့်မြင့်ကြည်အိပ်သည့် ကုတင်လေး တစ်လုံးသာရှိသည်။ မြဦးကလဲ အရင်မြဦးမဟုတ်တော့ ခပ်တန်းတန်းပင် ဝင်၍ထိုင်လိုက်သည်။ ကုတင်လေးပေါ်သို့ မြဦးတစ်ယောက် ထိုင်ချလိုက်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာပင် မြင့်မြင့်ကြည်ကလဲ မှန်ရှေ့မှထကာ သူရှိရာသို့လာသည်။ ထိုသို့ လာရင်းမှပင် မြင့်မြင့်ကြည်က…..“ ကိုဦးက …….. ကြည်ကို (၂)ယောက်ထဲတွေ့ချင်တယ်ဆို…” “ အင်းလေ …. “ “ ဘာဖြစ်လို့လဲ…” “ တို့ သမီးရည်းစားတွေဘဲဟာ (၂)ယောက်ထဲဆိုတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရှိတာပေါ့…..” မြင့်မြင့်ကြည်၏မျက်နှာလေးသည်ပြုံးစစလေးဖြစ်၍သွားရာကပင်။
မြဦး၏ ဘေးကုတင်ပေါ်သို့ သူမ၏ ကိုယ် လုံးလေးကို ထိုင်၍ချလိုက်လေသည်။ မြင့်မြင့်ကြည်ထံမှ မွှေးပျံ့သောသင်းရနံ့တို့သည် မြဦးဆီသို့ တည့်တည့်မတ် မတ်ပင်ဝင်ရောက်၍လာရာက မြဦး၏ရင်ကိုထိုးဆွ၍နေချေပြီ။ မြဦးသည မြင့်မြင့်ကြည်ရှိရာဖက်သို့ငဲ့စောင်းကာ ကြည့်လိုက်မိသည်။ ဒီနေ့တွင် မြင့်မြင့်ကြည်တစ်ယောက်ခါတိုင်းကျောင်းတက်ကျောင်းဆင်း သွားစဉ်ကထက်ပင် ပို၍လှနေသည်။ သေသေချာချာကို ဂရုတစိုက်ဖြင့် အလှပြင်ထား ပုံရလေသည်။ ပြီးတော့သူမ၏မျက်နှာလေးက ငုံ့ လျှက်ကုတင်ဘေး ကြမ်းပြင်ကိုစူးစိုက်ကာကြည့်နေသည်။ သူတို့နှစ်ဦးသားမှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်စကား မဆိုမိကြချေ။ အိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးကလည်း တိတ်ဆိတ်၍ ငြိမ်သက်၍နေသည်။
တချက်တချက်တွင်အခန်းပြူတင်းပေါက်မှ ဝင်၍လာသော လေပြေလေးများသည်သာ မြဦးနှင့် မြင့်မြင့်ကြည်တို့ကို တိုးဝှေ့ဖြတ်သန်းလျှက်ရှိသည်။ မြင့်မြင့် ကြည်နှင့် ယှဉ်တွဲ၍ ထိုင်နေရာက စိတ်တွေလှုပ်ရှား၍ လာရသော မြဦး၏လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ပုခုံးဆီသို့ ကျရောက်၍သွားရာက မြင့်မြင့်ကြည်၏နုထွေးသော ပုခုံးလုံးလုံးလေးကို သူ၏လက်ဖဝါးဖြင့်ဆုတ်ကိုင်လိုက်ရင်း…… “ ကြည့်ကိုဦးကိုချစ်လား….ဟင်…” မြဦး၏စကားသံက ပုံမှန်ထက်တုန်ခါ၍ နေရသလိုမြင့်မြင့်ကြည်၏ မို့မောက်မောက် လေးဖြစ်၍နေသော ရွှေရင်နှစ်မွှာသည်လည်း နိမ့်ချီမြင့်ချီလေးဖြစ်၍နေသည်။ မြဦး၏ တုန်လှုပ်လှိုက်ဖိုသော အမေးစကားကို ကြားရစဉ် အခါမှာပင်ရင်ထဲတွင်နွေးကာ သွားရသော မြင့်မြင့်ကြည်သည် မြဦးကိုလည်း အံသြ၍သွားရသည်။
ဒါ့အပြင်သူ၏ စိတ်ထဲတွင်လည်း ကြေနပ်၍သွားရသည်။ “ အင်း….” မြင့်မြင့်ကြည်က တိုးတိုးလေး ဖြေလိုက်ရင်းကရီဝေသော မျက်လုံးအစုံဖြင့် မြဦးကို လှည့်၍ကြည့်လိုက် သည့်ခဏမှာပင် မြဦးနှင့်မြင့်မြင့်ကြည်တို့၏ မျက်နှာနှစ်ခုတို့မှာ ထိလုမတတ်ဖြစ်၍သွားခဲ့ရပြီး မျက်လုံးချင်းလည်း ဆုံစည်း၍ သွားခဲ့ရပေသည်။ ကျန်နေသော မြဦး၏လက်တဖက်က သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးပေါ်သို့ထပ်မံ၍ ကျရောက် လာခဲ့ရပြီးခဏမှာပင်မြဦးသည် မြင့်မြင့်ကြည်၏ ကိုယ်လုံးလေးကိုဆွဲယူကာ ဖက်လိုက်ရာက သူမ၏ဖေါင်းဖေါင်းမို့မို့ ပါးမို့ဖြူဖြူလေးများအား မွှေးကြူလိုက်ပေတော့သည်။ ချစ်စရာ့အသွင် မျက်နှာလေးကိုမော့၍ ပေးလိုက်မိရင်းကပင် ရင်ထဲမှပြင်းပြလာသော ပီတိအဟုန်တို့ ကြောင့်မြင့်မြင့်ကြည်သည်မြဦး၏ကိုယ်လုံးကြီးကို ပြန်၍ဖက်တွယ်လိုက်မိပါသည်။
သည်လိုအချိန်မျိုး သည်လိုအပြု အမှုမျိုးကို စိတ်ကူးယဉ်ကာ မျှော်လင့်ခဲ့ရလေသော မြင့်မြင့်ကြည်တစ်ယောက်၊ သူမ၏မျှော်လင့်ချက်တွေသည် ပြည့်စုံခဲ့ရပေပြီ။ သူမသည်မြဦးကိုလည်း နားမလည်နိုင်စွာ ဖြစ်ရလျှက်အံသြကျေနပ်၍လည်း နေမိသည်။ မြဦး နမ်းသည်ကို အားရကြေနပ်စွာ အနမ်းခံနေသော မြင့်မြင့်ကြည်၏ မျက်နှာလေးသည်ပင် ပြုံးရောင်လေးသန်း၍ နေရလေသည်။ မြဦးက မြင့်မြင့်ကြည်၏ ပါးပြင်နှစ်ဖက်ကိုသာမက နဖူးဆံစပ်လေးများနှင့် မေးဖျားကလေးကိုပင် မွှေးကြူကာ နမ်းနေပါသေးသည်။ပြီးတော့မှမြဦးကသူ၏ မျက်နှာကိုအသာခွာကာ မြင့်မြင့်ကြည်၏ မျက်နှာလေးကို စိမ်းစိမ်းလေးတစ်ချက် ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှ သူ၏နှုတ်ခမ်းတွေက မြင့်မြင့်ကြည်၏ နှုတ်ခမ်းလုံးလုံးလေးတွေပေါ်သို့ ဖိကပ်ကာစုပ်နမ်း လိုက်ပါတော့သည်။
နှစ်ဦးစလုံး၏ အစိမ်းသက်သက်ရှိလေသော သွေးသားတို့သည် ဟုန်းကနဲ နှိုးကြွကာထ၍ လာခဲ့ရချေပြီ။ ဒီလိုနမ်းရင်းမှပင် မြဦးသည် မြင့်မြင့်ကြည်၏ ကိုယ်လုံးလေးကို တဖြေးဖြေးအိပ်ယာပေါ်သို့ လှဲချပေး လိုက်ရင်းမှမြဦးသည်သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကိုတင်းကြပ်စွာ ပွေ့ဖက်ထားနေမိသလို မြင့်မြင့်ကြည်ကလဲ မြဦး၏ ကိုယ်လုံးကြီးကိုအတင်းပင် သိမ်းကြုံး၍ ပွေ့ဖက်ထားလိုက်မိပါသည်။ ပြီးတော့လဲ အတုမြင် အတတ်သင်ဆိုသလို မြဦးသည် သူဖိထားလေသည့်အတိုင်း သူ၏လက်တွေက အငြိမ်မနေဘဲ မြင့်မြင့်ကြည်၏ တကိုယ်လုံးကို ပွတ်သပ်နေရုံမျှမက တင်သားလုံးလုံး ဖေါင်းဖေါင်းတွေကိုပါ ဆုတ် နယ်ပေးနေပြန်သည်။ မြင့်မြင့်ကြည်မှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်မှန်း သူမကိုယ်သူမပင်မသိ။ တကိုယ်လုံး ဖျဉ်းကနဲ ရှိန်းကနဲ ခံစားနေရာမှ တကိုယ်လုံးအားအင်တွေ ဆုတ်လျှော့လာသလို နွမ်းနယ်လာလေသည်။
မြဦးသည် မြင့်မြင့်ကြည် ဝတ်ထားသော အင်္ကျီလေးပေါ်မှ သူမ၏စူစူမို့မို့ ရွှေရင်နှစ်မွှာကိုဖိကပ်ကာနမ်းနေသည်။ ပြီးတော့မှ မြဦးက ရင်စေ့အင်္ကျီလေးမှ ကြယ်သီးတွေကို တစ်လုံးချင်းဖြုတ်ပစ်လိုက်သည်။ မြင့်မြင့်ကြည်မှာတော့ ပက်လက်လေးလှန်ကာ ရီဝေသော မျက်လုံးလေးများဖြင့် မြဦးကိုကြည့်လျှက်မောင့် မျက်နှာ တစ်ရွာထင် ဆိုတာလို မြဦးပြုသမျှနုရတော့မည့် အသွင်ဖြင့် ငြိမ်သက်၍ ပက်လက်လေးလှဲနေသည်။ သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးတစ်ခုလုံးမှာ ငြိမ်သက်၍နေသော်လည်း သူမ၏အတွင်းစိတ်များမှာ လှုပ်ရှားနေသည် ဆိုသည်ကိုတော့ လက်ဖျားနှစ်ဖက်ဆီမှာ လက်ချောင်းလေးများ၏ လက်ဆစ်လေးများကို တစ်ဖျောက်ဖျောက် ချိုးနေသည်ကို မြင်ရခြင်းဖြင့် သိသာနိုင်လေသည်။
မြင့်မြင့်ကြည်၏ ဘော်လီအင်္ကျီမှ ကြယ်သီးများမှာအားလုံး ပြု တ်ထွက်သွားခဲ့ပြီးချိန်တွင်တော့ မြဦးသည်သူမ၏ ဘော်လီအင်္ကျီလေးကို လှန်တင်လိုက်လေရာ ဖေါင်းမို့မို့လေးဖြင့် သူမ၏ နို့လေးနှစ်လုံးကို မြင်တွေ့လိုက်ရစဉ်ခဏမှာပင်မြဦးသည်ငုံ့၍အတင်းပင်စို့ပါတော့သည်။ “အိုကနဲ” ဖြစ်သွားရလေသော မြင့်မြင့်ကြည်ခမျာမှာတော့ ခံစားရခက်လွန်းသဖြင့် သူမ၏ကျောပြင်လေးကို ကော့၍ကော့၍ ပေးနေမိရုံမှတပါး တစ်ခြားဘာမျှ မတတ်နိုင်တော့ပေ။ အဲ….တခြား သူမတတ်နိုင်တာ တစ်ခုက တော့၊ သွယ်လျှဖြူဖွေးလေသော သူမ၏လက်လေးနှစ်ဖက်ဖြင့် မြဦး၏ကိုယ်လုံးကြီးကို ပွေ့ဖက်ကာထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သူမ၏မျက်လုံးလေးတွေကလဲ စင်းနေချေပြီ။ မြဦး၏လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် ထက်အောက်စုံဆန် ပွတ်သပ်ပေးနေပါသည်။
သည်မှာပင် မြဦးက မြင့်မြင့်ကြည်၏ ပေါင်တံနှစ်ဖက်ကို တဖက်မှ တဖက်သို့ကူးလိုက်သန်းလိုက်လုပ်ကာ ပေါင်ရင်းမှပေါင်ဖျားနားသို့ပါ စုံဆန်ပွတ်ပေးနေပါသည်။ မြင့်မြင့်ကြည်၏ ပေါင်လုံးကြီးတွေမှာ အငြိမ်နေ၍မရတော့ပါ။ လှုပ်လှုပ်ရွရွပင်ဖြစ်နေရချေပြီ။ မြဦးသည် မြင့်မြင့်ကြည်၏ နို့အုံလေးတွေကို တဖက်မှတဖက်သို့ ပြောင်း၍စို့ပေးနေရင်းကပင်ဗြုံးကနဲကြုံး၍ ထလိုက်ရာမှ သူမ၏ပေါင်နှစ်လုံးကိုဆွဲမကာ တပြိုင်နက်တည်းမှာပင်သူသည်အင်္ကျီကိုမချွတ်တော့ဘဲ ပုဆိုးခါးပုံစကို ဆွဲဖြုတ်ချလိုက်ရင်း သူမ၏ထဘီလေးကိုလည်း ခါးဆီသို့လှန်၍တင်လိုက် လေတော့သည်။ “ အို…ကိုဦး…ဘာ…ဘာလုပ်မလို့လဲ….မလုပ်နဲ့လေ…အို…အဟင့်…” မြင့်မြင့်ကြည်တစ်ယောက် သည်မျှအထိမရည်ရွယ်ခဲ့ရိုးအမှန်ပါ။ ဒီလောက် အထိလည်း အရဲစွန့်ရန် မရည်ရွယ်ခဲ့ပေ။
သူငယ်ချင်းများပြောဆိုသဖြင့်ကြားဖူးနားဝဖြင့်စိတ်ကူးယဉ်၍ ရင်ခုန်မိခဲ့သော်လည်း ဒီလိုကိုယ် တွေ့ ကြုံလာပြန်တော့ ထိတ်လန့်၍ မရဲတာအမှန်ပင်။ လက်လေးက သူမ၏ထဘီလေးကိုလှမ်း၍ဆွဲကာ အတင်း ဖုံးရင်း ကမန်းကတန်းငြင်းဆန်လိုက်ပေမဲ့လည်း မုန်ယိုသော ဆင်တကောင်ပမာ ဖြစ်၍နေလေသော မြဦးကလဲ လုံးဝအလျှော့မပေးတော့သဖြင့်သူမ၏ငြင်းဆန်မှုများသည်အချီးနှီးဖြစ်ခဲ့ရလေသည်။ တခဏအတွင်းမှာပင်မြဦးသည် သူမ၏ခြေထောက်ဖွေးဖွေးလေး နှစ်ချောင်းကို ကားလိုက်ရာ တဆတ်ဆတ် ဖြစ်နေလေသော သူ၏လီးတန်ကြီးကိုမြင့်မြင့်ကြည်၏ အမွှေးနုလေးများစိမ်းနေကာ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေး ဖြစ်နေသော စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကြားသို့တေ့ကာဖိသွင်းနေလေသည်။ “ အို…အို… ကို.. ကို….ဦး…” ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံကလည်းဖြစ်။
ရမက်ဆန္ဒတွေကလဲ အဆမတန်ပြင်းထန် နေလေတော့ သူ၏ လီးတန်ကြီးမှာ မြင့်မြင့်ကြည်၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ တန်းတန်းမတ်မတ် ဝင်၍မသွားဘဲ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ခုကိုဟိုထောက်ဒီထိုး ဖြစ်နေရသလို စောက်ပတ်ဝထိပ်နားရှိစောက်စေ့နေရာလေးကိုလည်း လီးတန်ကြီး ထိပ်က ဖိ၍ဖိ၍ ထိုးနေလေတော့ မြင့်မြင့်ကြည်တစ်ယောက်မှာ ဆက်၍ ငြင်းဆန်ရန်ပင်သတိမရတော့ဘဲ ကြက်သီးတွေ တဖျန်းဖျန်း ထလျှက်ရှိရာ မထူးတော့ပါဘူး ဒီလိုဆိုရင် ဘယ်လိုနေမလဲဟူသော အတွေးဖြင့်လက်တဲ့စမ်းရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ရပေပြီ။ ဟိုထိုးဒီထောက်ဖြင့် ဖြစ်နေလေသော မြဦး၏လီးတန်ကြီးထိပ်က သူမ၏စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ခု အစပ်လေးနှင့် စောက်စေ့လေးကိုပါ ဖိသိပ်နေတော့ သူမ၏ရမ္မက်စိတ်တွေကိုတမင်ပင်ထိုးဆွနေသလို ဖြစ်နေပြီး။
မြင့်မြင့်ကြည်သည် “အို” ကနဲ “အို”..ကနဲ ဖြစ်ကာတသိမ့်သိမ့်တုန် နေရလေတော့သည်။ သူမ၏တကိုယ်လုံးသည် ရှိန်းကနဲ ဖိန်းကနဲ နွေးကနဲ အေးကနဲဖြင့် ယောက်ယက်ခတ်နေရလေသည်။ မြဦး၏နဖူးဆံစပ်တွင်လည်း ချွေးဥ လေးများ စိမ့်၍ထွက်လာခဲ့လေပြီ။ မြဦးသည် ဟင်းကနဲသက်ပြင်းချရာက သူ၏အင်္ကျီကိုဆွဲ၍ ချွတ်ပစ်လိုက်လေသည်။ ထိုနောက် သူ၏လက်တဖက်က သူမ၏စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသား ဖေါင်းဖေါင်းလေးများဆီသို့ တုံရီစွာဖြင့် လှမ်း လိုက်သည်။ ပြီးတော့ မရဲတရဲဖြင့်ဖေါင်းအိနေသော မြင့်မြင့်ကြည်၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကိုအသာလေး ဖြဲလိုက်တော့သည်။ “ အို…. အကို…” မြင့်မြင့်ကြည်မှာ သူမ၏မျက်လုံးလေးနှစ်လုံးကို စုံမှိတ်လိုက်ရင်း သူမ၏မျက်နှာလေးကိုလဲ တဖက်သို့ စောင်းငဲ့ကာ လွှဲလိုက်လေတော့သည်။
မွှေးညှင်းနုလေးများ စိမ်းမြမြဖြင့်မြင့်မြင့်ကြည်၏ စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသား ဖေါင်းဖေါင်းလေး နှစ်ခုပြဲဟသွားလေသောအခါတွင်တော့ နီရဲလျှက် အထပ်ထပ်အလွှာလွှာပမာဖြစ်၍နေလေသော စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများသည် စိမ့်ထွက်နေပြီဖြစ်သော စောက်ရည်ကြည်လေးများကြောင့် ပြောင်လက် ရွှမ်းစိုစွာဖြင့် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ရလေသည်။ ထိပ်ဖက်တွင် ငေါက်တောက်လေးဖြစ်နေသော စောက်စေ့လေးကလဲ ရဲရဲနီ၍အသဲယားစဖွယ်ဖြစ်နေလေသည်။ ပြောင်တင်းကာ အရည်ကြည်လေးများ စိမ့်၍ထွက်နေသော မြဦး၏လီးတန်ကြီး ထိပ်ဖူးကြီးသည် သူမ၏ စောက်ပတ်ဝ အတွင်းသားနုနုလေးများကို ပူနွေးစွာဖြင့် တွေ့ထိလာတော့လေသည်။ မြင့်မြင့်ကြည်သည် အသက်ကို ဝအောင်ရှုလိုက်ရင်း နှုတ်ခမ်းလေးနှစ်ခုကိုတင်းတင်းလေးစေ့ကာ မာန်တင်းလိုက်မိသည်။
ထိုအချိန်မှာပင် ရမ္မက်ဇောတွေပြင်းပြကာ စိတ်တွေမထိန်းနိုင်သော မြဦးသည် သူ၏လီးတန်ကြီးကို မြင့်မြင့်ကြည်၏ စောက်ခေါင်း နုနုလေး ထဲသို့ တအားပင်ဖိ၍ သွင်းလိုက်လေသည်။ “ ဗြစ်…ဗြစ်…အား…အမလေး…. သေပါပြီ…. ကျွတ်….ကျွတ်…ကျွတ်…” မြင့်မြင့်ကြည်မှာ သူမ၏ခါးသေးသေးလေးသာ ကော့တက်သွားသည်မဟုတ်။ သူမ၏ကျောပြင်သည်လည်း ကော့၍တက်သွားရလေသည်။ ပြီးတော့မြင့်မြင့်ကြည်၏ အသားလေးများသည် တဆတ်ဆတ်တုန်၍နေသည်။ သူမ၏ စောစောက စောင်းငဲ့ထားသော မျက်နှာလေးကတော့ မော့၍လာပေမဲ့ မျက်နှာလှလှလေးမှာ ရှုံ့မဲ့နေလေသည်။မြဦးသည် ထိတ်ထိတ်ပြာပြာ ဖြစ်သွားပြီး ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိဖြင့် ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်း မသိအောင်ဖြစ်နေလေသည်။
ပြီးတော့မှ မြဦးသည် သတိရသွားပြီး လီးတန်ကြီးကိုဆွဲ၍ ချွတ်တော့မယ်လုပ်ပြီးမှမချွတ်ဖြစ်တော့ ဘဲ လီးတန်ကြီး တစ်ချောင်းလုံးကိုမြင့်မြင့်ကြည်၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ တဆုံးသွင်းလိုက်ကာ သူ၏ကိုယ်လုံးကြီးကို မြင့်မြင့်ကြည်၏ ကိုယ်လုံးပေါ်သို့ မှောက်ချလိုက်ပြီး သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို ထွေးဖက်ကာ နို့လေးနှစ်လုံးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်စို့နေလေတော့သည်။ စောက်ခေါင်းထဲတွင် အတော်ပင်နာအောင့်၍သွားသော မြင့်မြင့်ကြည်သည် နဂိုကပင်ရမ္မက်ထန် တဏှာကြီး သော ဗီဇကပါလာ၍လားမသိ။ နာလွန်း၍အော်ဟစ်ကာ ညီးတွားလိုက်ရသော်လည်း သူမ၏အော်ဟစ်ညီးတွားသံ လေးအဆုံးတွင် ထိုကဲ့သို့ စောက်ခေါင်းထဲ နာကျင်၍အောင့်သွားကာ မချိမဆန့်ခံစား လိုက်ရသည်ကိုပင် ရင်ထဲတွင် ကြေနပ်သွားရသည်။
ထို့နောက် တဆက်တည်းမှာပင်သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှရမ္မက်သွေးများသည်ပို၍ပြင်းထန်စွာ ထကြွ လာရလေသည်။ အရှက်တရားဆိုသည်ကတော့ သူမ၏ရင်ထဲတွင်လုံးလုံးလျားလျား ပင်မရှိတော့ပေ။ ကြည့်ပါအုံး နို့စို့နေသော မြဦးထံသို့ သူမ၏နို့တွေကိုပင် ကျောလေးကော့ကာ ကော့ကာဖြင့်ပင့်ကာပေးနေသလို တတ်ကျွမ်းမှုမရှိသေးသဖြင့် သူမ၏ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ကားသထက်ကားကာ စောက်ပတ်လေးကို မြဦး၏ လီးတန်ကြီးအရင်းသို့ အတင်းပင် ဖိကပ်ပေးနေမိချေသည်။ မြင့်မြင့်ကြည်၏ လက်လေးနှစ်ဖက်ကတော့ တဖက်ကမြဦး၏ ကျောပြင်ကြီးကိုသိမ်းကြုံး ဖက်ထားပြီး ကျန်လက်တဖက်က မြဦး၏ဦးခေါင်းမှ ဆံပင်တွေကို လက်ချောင်းလေးများဖြင့် ထိုးသွင်းကာ အားမလို အားမရဖြင့်ထိုးဖွ၍နေလေသည်။
မြဦးမှာ မြင့်မြင့်ကြည် နာလွန်း၍အော်သဖြင့် အရှိန်သတ် လိုက်ရလေသည်။ သူ၏စိတ်တွေကတော့ အဆမ တန် ရမ္မက်တွေ ထန်နေရလေသည်။ လိုးချင်စိတ်တွေ များလာသော မြဦးက မြင့်မြင့်ကြည်၏ အခြေအနေကို ကြည့်လိုက်သည်။ “နာသေးလား”ဟုမေးရန် စိတ်ထဲက ကြံလိုက်ပေမဲ့လည်း ပါးစပ်ကပြောမထွက်မြင်ရသောအခြေ အနေကတော့ မြင့်မြင့်ကြည်တယောက် နာကျင်ပုံမရတော့။ မြဦး၏ဆောင့်ချက်ကြောင့် အင့်ကနဲတချက်ဖြစ်သွားရသော်လည်း မာကြောလွန်းသော လီးတန်ကြီးကြောင့် သူမ၏စောက်ပတ် အတွင်းသားလေးများမှာ အီဆိမ့်သွားရသလို ရင်ထဲတွင်လည်း ကျေနပ်သွားရသည်။ မြဦး ကလည်း ညှာတာရကောင်းမှန်း မသိဘဲအတင်းပင်ဆောင့်လိုးပေတော့ရာ စောက်ပတ် အသစ်စက်စက်လေးဖြင့် အလိုးခံနေသော မြင့်မြင့်ကြည်က နာကျင်မှုတွေကို ပူးတွဲခံစားနေရပေမဲ့လည်း။
ဒီလိုခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်တာကိုပင် သူမစိတ်ထဲတွင်အားရကြေနပ်နေရလေသည်။ မြဦးကတော့ သူ၏ကိုယ်လုံးကြီးကို သူမ၏ကိုယ်ပေါ်မှကြွကာ ဘေးတဖက်တချက်ဆီတွင်လက်ထောက်၍ စိတ်ထင်တိုင်း ဆောင့်နေသဖြင့်မြဦး၏ဆောင့်ချက်များမှာ အထူးပင်ပြင်းထန်လှကာ နှစ်ဦးစလုံးမှာ တခါဘူးကမှ မကြုံခဲ့ဖူးလေသော ထူးခြားလှသည့်အရသာကို တမေ့တမောကြီး ခံစားနေရလေသည်။ မြင့်မြင့်ကြည်၏စိတ်ထဲ ရင်ထဲတွင်လည်း မြဦးကိုခင်တွယ်သည့်စိတ် ချစ်တဲ့စိတ်များပို၍ ပို၍လာရသလို မြဦးကလဲ မြင့်မြင့်ကြည်အပေါ်တွင် ကြင်နာစိတ်များ ချစ်စိတ်များ ပိုလာလေတော့သည်။ မကြာလိုက်ပါချေ။ မြဦး၏လီးတန်ကြီးက သူမ၏စောက်ပတ်ထဲသို့ အတင်းဆောင့်ကာ လိုးသွင်းပြီး ဖိကပ် လိုက်ချိန်မှာပင်မြင့်မြင့်ကြည်ကလဲ သူမ၏စောက်ပတ်ကို အတင်းပင်ကော့တင်ပေးကာ သူတို့နှစ်ဦးလုံး၏ ခန္ဓာ ကိုယ်နှစ်ခုသည် တလွန့်လွန့်တွန့်၍သွားရပါ လေတော့သည် ….. ပြီးပါပြီ။
မောင်သက် ဆယ်တန်းစာမေးပွဲဖြေပြီးတော့ အဘွားတို့ ရွာသွားနေခဲ့သည်။ ဒီမှာက လွတ်လပ်တယ် အဘွားတို့ကလဲ ဘာလုပ်လုပ် မဆူမဆဲ သောက်လိုက်စားလိုက် လယ်ထဲယာထဲလိုက်ကူလိုက် နေ့လည်နေ့ခင်းဆို အမျိုးတွေအသိတွေ အိမ်လည်လိုက်နဲ့ တစ်လလောက်တောင်ရှိသွားပြီ အသိအိမ်က အမကြီးတစ်ယောက်က မသူဇာတဲ့ ဖြူဖြူဖွေး ရေဆေးငါးကြီး မြို့မှာကိုး တန်းထဲကကျောင်းသွားတက်ပြီး ဆယ် တန်း သုံးခါကျနဲ့ ရွာပြန်လာပြီး အ်ိမ်မှာပဲ အသုပ်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ် သူတို့က သာမန်လူတန်းစားပါ မြို့မှာကျောင်းနေတာလဲ သူ့အဒေါ်ခေါ်ထားပေးတာတဲ့ ခုတော့ သုံးခါကျလို့ သူဆက်မနေချင်လို့ပြန်လာတယ် ပြောတာပဲ။ ကျတာလဲမပြောနဲ့ ရည်းစားခပ်များများတဲ့ အကိုဝမ်းကွဲပြောတာ နောက်တစ်ယောက်က ဦးလေးခယ်မ မနုနုဝင်း ကျွန်တော့်ထက် ငါးနှစ်လောက်ကြီးတယ် သူကတော့ တောသူပီပီ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်အသားညိုညိုနဲ့ငါးရံ့ကိုယ်လုံးလေး။
လွန်ခဲ့သော၂၀၀၆ခုနှစ်ကတော့ကျမအသက် ၂၃နှစ်အရွယ်လောက်ကပေါ့ရှင်။ ကျမကျောင်းပြီးပြီ အလုပ်အတွက်သင်တန်းတွေပြေးတက်ရင်း ပေါ့ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့တာလေးပြောပါရစေ။ဟီးဟီး ပြောချင်ဇောကများနေတော့နာမည်ပြောဖို့မေ့နေတယ်။ကျမကပန်းသဇင်တဲ့။ပင်မြင့်မှာပွင့်တဲ့ပန်းလေး လို့ဖေဖေကနာမည်လေးပေးခဲ့တာ။ ကျမဘဝတိုးတက်မြင့်မားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပေးထားတဲ့နာမည်လေးပေါ့။ဒါပေမယ့်ကျမကိုအရမ်းလှသလားလို့မေးရင်အရမ်းမလှပေမယ့်ချစ်စရာကောင်းပါတယ်။အသားဖြူတယ်။မျက်နှာအကျကောင်းတယ်။နှာခေါင်းစင်းတယ်။မျက်လုံးမျက်ခုံးကောင်းတယ်။အင်းကိုယ်လုံးလားလှတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့။ ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားနှင့်စွင့်ကားတဲ့တင်ရှိတယ်။ ကိုယ်ရေးသွေးတာတော့ဟုတ်ပါဘူးရှင့် အင်းလိုရင်းပဲပြောပါ့မယ်။ဒီလိုပါ ကျမသင်တန်းတ၇စ်ခုတက်ရမယ်ဆိုတော့အလုပ်ကနေအပြေးအလွှားတက်တယ်။DMLမှာ ပေါ့။အလုပ်ထဲကလာရတော့နောက်ကျသွားတယ်။
ဆေးရုံကြီး အပြင်ဘက် မှန်ပြတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ကိုလှမ်းကြည့် မိတော့ ကျေးငှက်သံလေးတွေနဲ့ အစိမ်းရောင် သစ်ပင်ကြီးများကြောင့် ဘဝ အမောတွေကို ခဏတာ မေ့ပျောက် သွား စေတာပဲလေ။ မနက် ၈နာရီ ကျော်ကျော် လေးပဲ ရှိသေးတာပါ။ ညက ဆိုင်ကယ် အက်ဆီးဒင့် ဖြစ်တဲ့ လူနှစ်ယောက် ရောက်လာတော့ ၂ယောက်လုံး နွေး ကိုယ်တိုင် ရရှိလာတဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို ချုပ်ပေးရတယ်။ တယောက်က လက်မောင်း နှစ်ဖက် နဂါးပုံ တက်တူးတွေနဲ့ အသက်က ၂၀ကျော်လောက်ပဲ ရှိမှာ မျက်နှာ နုနုချောချော လေးကို နားကွင်းတွေရော မျက်ခုံးပေါ်ပါ အကွင်းလေးတွေ ဖေါက်ဆွဲထားတော့ ရုတ်တရက်ဆို အကြည့်ရ ဆိုး နေတာပေါ့။ အရိုးခေါင်းတွေပါတဲ့ တီးရှပ် အနက်ရယ် လည်ပင်းက စတီးဆွဲကြိုး […]